यूरोपमा फैलिरहेको ‘मन्की पोक्स’ कस्तो रोग ? – Sunaulopana
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १७:२२
बेलायतमा मन्की पोक्स नामको रोग फैलिन थालेको छ । बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सी (UKHSA) ले अहिलेसम्म सात जनामा ​​संक्रमण भेटिएको जनाएको छ । संक्रमित चारै जना बिरामीले आफूलाई समलिङ्गी वा उभयलिंगी भनेर चिनाएका छन्। यसैलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञहरूले समलिङ्गी पुरुषलाई पनि चेतावनी दिएका छन् ।
यसको संक्रमण बेलायत, अमेरिका, स्पेन र पोर्चुगलमा समेत देखिएको छ ।
यो रोग बाँदर पोक्स भाइरसबाट लाग्ने गर्छ । यो भाइरस बिफर भाइरसको परिवारको सदस्य हो। विज्ञहरुका अनुसार यो संक्रमण धेरै गम्भीर छैन र यसको फैलने दर पनि निकै कम छ । हाल, मन्कीपक्स मध्य र पश्चिम अफ्रिकी देशका केही क्षेत्रमा पाइन्छ। यसको पनि दुई मुख्य प्रकारहरू छन् – पश्चिम अफ्रिकी र मध्य अफ्रिकी।
यो रोग पहिलो पटक सन् १९७० मा बन्दी बाँदरमा फेला परेको थियो, त्यसपछि यो अफ्रिकी १० देशमा फैलिएको थियो । यसको केसहरू पहिलो पटक २००३ मा अमेरिकामा रिपोर्ट गरिएको थियो। नाइजेरियामा सन् २०१७ मा बाँदर पोक्सको सबैभन्दा ठूलो प्रकोप थियो, यसका ७५ प्रतिशत बिरामीहरू पुरुष थिए। यसका केसहरू पहिलो पटक सन् २०१८ मा बेलायतमा रिपोर्ट गरिएका थिए।
यसरी फैलिन्छ रोग
संक्रमित व्यक्तिको नजिकको सम्पर्कबाट बाँदर पोक्स सर्ने विज्ञहरुको विश्वास छ । यो भाइरस बिरामीको घाउबाट निस्किएपछि आँखा, नाक र मुखबाट शरीरमा प्रवेश गर्छ । यो संक्रमित बाँदर, लोखर्के वा बिरामीको सम्पर्कमा आएको ओछ्यान र कपडाबाट पनि फैलिन सक्छ।
बेलायतमा कसरी संक्रमित भए ?
युकेएचएसले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्कीपक्स बिरामीहरूमा कसरी फैलियो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। यस हप्ता भेटिएका चार बिरामी पुरुष हुन् र तीमध्ये तीन लन्डनका र एक उत्तर पूर्वी इङ्गल्याण्डका हुन्। ती मध्ये कुनै पनि हाल अफ्रिकी देशको भ्रमण नगरेको बताइएको छ ।
ती सबैले आफूलाई समलिङ्गी वा उभयलिंगी भनेर चिनाएका छन्। यसको मतलब यी पुरुषहरूले पुरुषसँग सम्बन्ध राखेका छन्। तर, अहिलेसम्म बाँदर पोक्सलाई यौनजन्य रोग मानिएको छैन। तैपनि, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले समलिङ्गी र उभयलिंगी पुरुषहरूलाई कुनै लक्षण देखिए तुरुन्तै यौन स्वास्थ्य जाँच गराउन चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, गत हप्ता पत्ता लागेको तीन बिरामीमध्ये एक नाइजेरियाको यात्रा गरेका थिए। यात्राकै क्रममा उनलाई बाँदर पोक्स लागेको अनुमान गरिएको छ । अन्य दुई बिरामी सँगै बस्छन्।
प्रारम्भिक लक्षणहरूमा ज्वरो, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, ढाड दुख्ने, काँप्ने, थकान र ग्रन्थीहरू सुन्निने समावेश छ। यसपछि अनुहारमा एक प्रकारको दाग निस्कन थाल्छ, जुन शरीरका अन्य भागमा पनि फैलिन सक्छ । संक्रमणको समयमा शरीरभर नै फोका उठ्ने हुन्छ। जुन धेरै परिवर्तनहरू हुन्छ र अन्ततः स्क्याबको रूपमाझर्ने गर्छ।
रामेछापको सुनापति २ मा रहेको छोर्तेनको धार्मिक बिधि अनुरुप उद्घाटन सम्पन्न,संरक्षणमा जोड दिने पालिका अध्यक्षको प्रतिबद्दता
सुनापति गाउँपालिकाको आ.ब. २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
भारतमा थप बाह्र हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित
गाउँपालिका र अध्यक्ष थिङको सहकार्य : रिन्पोछे मुर्तिमा सोलार बत्ती जडान
अभिनेता पुष्प खड्का बने ‘एसआई फिटनेस’ को ब्राण्ड एम्बेसेडर